MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanada Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood kulul ka yeelanaya maalintii saddexaad amaanka magaalo madaxda wadanka iyo midka guud ee dalka, kaasoo mudooyinkii dambe sii xumaanayey.
Dooda oo soo bilaabtay Isniintii ayaa waxaa hadal-jeedin ka sameeyay dhowr mudane, kuwaasoo isugu jira mucaarad iyo muxaafid, waxayna cabirayeen Oraahdooda ku qotonta nabad-gelyada dalka iyo Muqdisho.
Afhayeenka Aqalka Hoose, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa kulanka Gollaha shir gudoomiye ka ahaa labadii maalmood ee lasoo dhaafey, xili la filayo inuu maanta isaga qabto.
Mudanayaasha Fadhiga soo xaadira maanta, gaar ahaan kuwa aanan doorkooda helin labadii maalin ee tegtay ayaa fursad la siin doonaa maanta, xili Sharci-dejiye walba uu haysto daqiiqado kooban.
In ka badan 45 Xildhibaan ayaa isku diiwaan-geliyay inay khudbado jeediyaan, kuwaasoo qaarkooda Xukuumadda ka difaacaya eedeha mudaniyaasha kale usoo jeediyaan, iyadoo xusida mudan tahay in 74% Wasiiradda Xukuumadda ay Xildhibaano yihiin.
Dhowr Xildhibaan, oo kuwa mucaarad ah ayaa soo jeediyay inuu is-casilo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, maadaama uu ku fashilmay howshii loo igmaday, oo ugu horeeyo amniga dalka, halka qaar ay dalbadeen in Khayre Gollaha Shacabka looga yeero. [Halkan ka akhri Warka].
Bishaan September waxaa Muqdisho ka dhacay in ka badan Saddex weerar oo loo adeegsaday Qarax, kuwaasoo mid kamid ah Gaarigiisa loogu soo xirey Xilldhibaan ka tirsan Gollahaan ka tirsan, xili uu dhaawac culus kasoo gaarey.
Amaanka ayaa kamid ah waxyaabaha ugu horeeya oo ay ku fashilanto dowlad walba oo dalkaan soo marta, maadaama ay jiraan kooxo hubeysan, kuwaasoo weeraro khasaaro lixaad leh dhaliya ka fuliya.
Jawaari ayaa xilka iska-casilay kadib Khilaaf Siyaasadeed oo ka taagnaa Gollaha Shacabka mudo...
Doodii ugu kululeyd ee Amniga Muqdisho oo ka dhacday Gollaha Shacabka
Soomaliya 17.09.2018. 16:43
Maxay kusoo dhamaatay Doodii Gollaha Shacabka ee fashilka amniga?
Soomaliya 19.09.2018. 15:54
Guddiga doorashada Koonfur Galbeed oo war soo saarey 12.12.2018. 11:21
Wasiir Bidhan oo bixiyay Ruqsad Kalluumeysi xilli uu Khilaaf jiro 12.12.2018. 09:49
Abiy Axmed iyo Afwerki oo kusoo wajahan Muqdisho [Ujeedka oo la ogaadey] 11.12.2018. 23:22
Xoghaye sheegay in Mooshinka Farmaajo buuxin waayay shuruudihii looga baahnaa 11.12.2018. 18:09
Trump oo lacag u raadinaya dhismaha darbiga xuduudda 11.12.2018. 15:21
Xildhibaanada Mooshinka ka gudbiyay Farmaajo oo war culus oo saarey 11.12.2018. 15:11